कसरी एकै पटकमा धेरै ब्याकलिङ्क सिर्जना गर्ने?
हाल, सबैलाई थाहा छ कि ब्याकलिङ्कहरू समान रुपमा सिर्जना गरिँदैन. Google ले यसको पेंगुइन अद्यावधिक स्थापना गर्नु अघि लिङ्क इमारत साधारण खोजी इन्जिन अनुकूलन प्रविधि थियो. आजकल, यदि तपाईं धेरै लेख लेख्नु हुन्छ र विभिन्न आलेख पेश्की साइटहरू लाई पठाउनुहोस्, यसले तपाइँलाई कुनै परिणाम नदिने वा खोजी इन्जिन दण्ड दिनेछ।. र याद राख्नुहोस्, कसैले पनि Google ले के गर्नेछ भनेर थाहा छैन. प्रत्येक समयमा तपाई खोज एल्गोरिदम खेल्न प्रयास गर्नुहुन्छ, तपाईलाई रद्द गर्न तयार हुनु आवश्यक छ.
तथापि, लिङ्क अधिग्रहणको लागि केहि गर्न रोक्न यो कारण होइन. यसको सट्टा, तपाईलाई कसरी सही तरिकामा उच्च गुणस्तर इनबाउन्ड लिङ्कहरू उत्पन्न गर्न सिक्नु पर्छ.
लिङ्क इमारत मरेको दावी गर्ने कुनै व्यक्तिलाई विश्वास नगर्नुहोस्. ब्याकलिङ्कहरू प्राथमिक रैंकिंग कारक बनी रहन्छन्. यद्यपि, केवल कार्बनिक र समान रूपमा प्राप्त लिङ्कहरूले परिणाम ल्याउन सक्छ.
यो पोष्ट तपाईसँग केहि उपयोगी सुझावहरू कसरी स्केलेबल तरिकामा लिङ्कहरू निर्माण गर्न साझेदारी गर्न डिजाइन गरिएको छ.
स्वस्थ लिंक बिल्डिंग आधार कसरी बनाउने?
आउनुहोस् कल्पना गर्नुहोस् कि तपाइँ नयाँ सामग्री टुक्रा बनाउनुहुन्छ र Google खोज नतिजा पृष्ठमा यसलाई प्रचार गर्न चाहनुहुन्छ. चूंकि तपाईंलाई थाहा छ कि उन्नत उच्च पीआर गुणवत्ता साइटहरु को लिंक्स देखि नतिजा हो, किन को रूप मा चाँडै सकेसम्म इनबाउंड लिङ्क उत्पन्न गर्न को लागी मतलब छैन? छोटो अवधि भित्र नयाँ सामग्री टुक्रामा धेरै इनबाउन्ड लिङ्कहरू निर्माण गर्न उचित छैन. यस्ता गतिविधिहरू Google को लागि संदिग्ध देखिन्छ. अझ राम्रो समाधान गुगललाई तपाईंको सामाग्री खोज्न र अनुक्रमणिकामा मद्दत गर्न हो. यसले केही समय लिन सक्छ तर तपाईंको साइटमा बढी मूल्य पाउदछ. एकपटक तपाईंको सामग्री अनुक्रमित भएपछि, तपाइँ कार्बनिक लिंक रस प्राप्त गर्न र आफ्नो दर्जामा सुधार गर्न सक्नुहुन्छ.
Google लाई कसरी तपाईंको सामग्री पत्ता लगाउन र अनुक्रमण गर्न मद्दत गर्दछ?
सामग्री अनुक्रमणिकाको प्रक्रिया छिटो गर्न, तपाईं एलेक्सा उपकरण प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ. वेब क्रलरहरू यस साइटलाई सबै समय पालना गर्दछ. जब तपाईले Alexa उपकरणमा तपाइँको डोमेन URL इनपुट गर्नुहुन्छ, यसले स्वचालित रूपमा तपाईंको नयाँ, अनुकूलित पृष्ठ डाटाबेसमा थप गर्दछ. जब खोज क्रलरले तपाइँको साइट फेरि दोहोर्याउँछ, तपाइँको मूल सामग्री टुक्रा Google द्वारा पार्स गरिनेछ.
तपाईंको सामग्रीमा Google बटहरू आकर्षित गर्न अर्को प्रभावकारी तरिका डेटा-प्रेरित इन्फोग्राफिकहरू सिर्जना गर्न हो. यसले तपाईंको लागि काम गर्न सक्दछ किनभने सोशल मिडिया छिटो अनुक्रमणिका र दृश्यता संग मद्दत गर्दछ. यही कारण छ कि यदि तपाईंको नयाँ सामग्री सोशल मिडिया प्लेटफार्महरूमा लोकप्रिय छ भने, यसले Google लाई सिग्नल दिन्छ कि प्रयोगकर्ताहरूले तपाईको सामग्रीको गुणस्तर र लिङ्कहरू फेला पार्छ।. यसको अर्थ तपाईंले यस गुणस्तर सामग्री टुक्राको वरिपरि बाह्य लिङ्कहरू उत्पन्न गर्न सुरु गर्नुहुँदा, कुनैपनि वेबसाइट लिङ्क कार्बनिक हुन्छ.
तथापि, तपाईंलाई सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ कि तपाइँ पाठकहरुको लागि प्रासंगिक र उपयोगी प्रत्येक सामाग्री, पोस्ट या लिंक को रूप मा आफ्नो संभावित ग्राहकहरु लाई अतिरिक्त मूल्य प्रदान गर्नु पर्छ.
एक नियमको रूपमा, परम्परागत, पुरानो लिङ्क इन्टर्निङले अन्त प्रयोगकर्ताको बारे चिन्ता गर्दैन. तथापि, गुण लिङ्क रस पाउन र खोज इन्जिनहरूको आँखामा प्राकृतिक लागी हेर्नको लागी, तपाइँलाई लक्षित लक्षित चाहिएको कुन कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ. तपाईंका पाठकहरूलाई पछ्याउन नसक्ने हो कि उनीहरूले लिङ्क गरिएको लिङ्क पछ्याउँदछन् Source .